CIN Khabar चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेकपाको टोलीबीच छलफल, वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सोल्टीमा
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेकपाको टोलीबीच छलफल, वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सोल्टीमा
सीआईएन आईतबार, असोज २६, २०७६, ११:१२:००
काठमाडौं २६ असोज । नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको टोलीबीच छलफल भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सचिवालय सदस्यहरूले भेटवार्ता भएको छ । बिहान १०:३० बजेदेखि होटल सोल्टीमा भेटघाट आधाघण्टासम्म भएको थियो ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय सदस्यहरू र राष्ट्रपति सीबीचको भेटवार्तामा कम्युनिष्टपार्टीबीचको सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पनि कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालय सदस्यहरूसँगको भेटवार्ता सकिएपछि राष्ट्रपति सी र अध्यक्ष प्रचण्डबीच वान टु वान भेटवार्ता छलफल समेत भएको छ । राष्ट्रपति सीले शनिबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएबमे थियो । त्यसअघि शनिबार नै राष्ट्रपति सी शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता भएको थियो ।
वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सोल्टीमा
आजै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हुने वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सोल्टी होटलमा पुग्नु भएको छ । वार्ताका क्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौता र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, अर्थ युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार लगायत ३० जनाको टोली सहभागी छ। यस वार्तापछि द्विपक्षीय २० बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने छ।
हस्ताक्षर पत्रमा रसुवागढी–काठमाडौं र तातोपानी–काठमाडौ सडक स्तरोन्नती, काठमाडौं टोखा– नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग, मदन भण्डारी विश्व विद्यालय. कर्णाली करिडोर लगायत समटिएका छन्। दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर राष्ट्रपति सी आइतबार दिउँसो १ बजे चीन उड्ने छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज २६, २०७६, ११:१२:००